IChiefs ifuna ukushaya izinyoni ezimbili | Ilanga News
Home Ezemidlalo IChiefs ifuna ukushaya izinyoni ezimbili
IChiefs ifuna ukushaya izinyoni ezimbili
Seyizolwela nokuba yikilabhu yokugcina ukunqoba i-Absa Premiership
UKHUTHAZA ozakwabo ukuqhubeka nokuziphatha kahle uDaniel Cardo-so oyisiqongqwane se-Kaizer Chiefs okumiswe imidlalo ye-Absa Premiership izihola phambili kwi-log.
Lo mdlali uthi kumqoka ukuthi abadlali bayilandele yonke imigomo yokuvalwa kwezinto ezweni ukuze kugwemeke izinkinga nxa sekufanele kubuye imidlalo.
Uthi kungaba buhlungu ukugunyazwa kokubuya kwemidlalo bese ilokhu ihlehliswa ngenxa yokuthi abadlali abaningi baha-qwe yilolu bhubhane.
“Kubalulekile ukuthi siyilandele imigomo ye-lockdown. Abadlali basengozini ngoba kuyathintwana ebholeni. Kumqoka ukuthi siqhu-beke nalezi zindlela ezingajwayelekile zokuziqeqesha.
Kungethuse kakhulu ukuvela kwezindaba zokuthi uBen Motshwari (we-Orlando Pirates) uhlaselwe yilo mkhuhlane.
“Lokhu kungidwebele isitho-mbe sokuthi nathi singabadlali sisengcupheni enkulu. Lesi simo sidinga ukuthi sonke sibambisane ukuze sikwazi ukubuyela enkundleni,” kusho lo mdlali.
Uthi bafuna ukuba yikilabhu yokugcina ukunqoba i-Absa Premiership njengoba ngeledlule kumenyezelwe ukuthi abakwa-Absa ngeke besayeseka le ligi. Uthi sebefuna ukushaya izinyoni ezimbili ngetshe elilodwa ngeligi.
“Besivele sikubeke kwacaca ukuthi iligi sifuna ukujabulisa ngayo uSihlalo wethu (uKaizer Motaung) njengoba ikilabhu igubha iminyaka ewu-50 yasungulwa kule sizini.
“Manje sesifuna ukuthi kube yithina ikilabhu yokugcina ukuqukula inkomishi ye-Absa Pre-miership njengoba sebehamba laba baxhasi (bakwa-Absa),” kusho uCardoso.
Imidlalo yeligi sekunesikhathi eside imisiwe ngenxa yeCovid-19. Kakukaziwa ukuthi izobuyela nini ensimini. UCardoso uthi enye inhloso yabo enkulu wukufaka ikilabhu emidlalweni yeCaf Cha-mpions League.
Uthi kubashayile ukumiswa kwemidlalo ngoba izinto bezibahambela kahle njengoba beqhwa-kele.
Uncome u-Ernst Middendorp ocija le kilabhu ngokuba ngubaba oqotho kubona bonke abadlali bale kilabhu.
Uthi ukufika kwalo mqeqeshi kulethe ukuzethemba kubadlali. Ozonqoba lesi sicoco uzogoduka nendebe unomphelo nemali eli-nganiselwa ku-R15 million. Kuthiwa iSport Pesa nayo isezingxoxweni nePSL, kanti ezinye izinkampani okuthiwa zicuthile yiBidvest Group nabakwaSuperSport TV.
FUNDA kabanzi ngalo mdlali ngempilo yakhe yaNgaphandle kweNkundla kwiLANGA LangeSontoungaphuthelwa.
Previous articleZikulungele ukuvula namuhla izikole
Next articleOwesilisa ushaye unina ngomshiza wambulala